Apple inovhara hurongwa hwayo hwekupokana kuongorora maPhones akavanzika emifananidzo isiri pamutemo
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kodzero Dzevanhu » Apple inovhara hurongwa hwayo hwekupokana kuongorora maPhones akavanzika emifananidzo isiri pamutemo
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • mhosva • dzidzo • Entertainment • Hurumende Nhau • Kodzero Dzevanhu • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • Technology • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Kunyangwe vashandi veApple vanonzi vakaratidza kunetsekana neiyo yekuona tekinoroji, vachishushikana kuti ingangoshandiswa kushanda pakatenderedza kudzivirirwa, kuti inogona kusanzwisisa nekumaka mamwe mapikicha.
Apple kunonoka invasive iPhone scans.
Apple scans yaizotsvaga zvekushungurudzwa kwevana pabonde.
Vashandi uye mapoka akarurama vanotaura kunetseka pamusoro pekudzvinyirira uye nyaya dzepachivande.
Chiziviso chine makakatanwa cheApple chezvirongwa zvekutarisa maPhones ese akazvimirira emifananidzo uye nhaurirano dzinogona kunge dziine zvinhu zvekushungurudza vana pabonde (CSAM) zvakasangana pakarepo nekufona kuti vasiye zvirongwa nemapoka ekodzero dzevanhu, kusanganisira American Civil Liberties Union (ACLU).
Mushure mekushoropodzwa kwakatevera chiziviso ichi, Apple yakazivisa kuti ichatora "nguva yekuwedzera" mumwedzi iri kuuya kushanda pazvirongwa zvekumaka CSAM, pakati pezvinonetsa kubva kune vanoita zvematongerwo enyika nemapoka ekodzero pamusoro pekudzvinyirira uye nezvehupfumi.
"Kubva pamhinduro kubva kune vatengi, mapoka ekurudzira, vaongorori nevamwe, isu tafunga kutora imwe nguva pamusoro pemwedzi iri kuuya kuti tiunganidze uye tigadzirise tisati taburitsa zvinhu zvakakosha zvekuchengetedza kwevana," apuro mutauriri akadaro muchitauti nhasi.
Apple tekinoroji yaizoongorora iPhone mapikicha nekutaurirana kweCSAM, vachishandisa chirongwa chakambotaurwa nekambani kuti chingangodzivirira kuvanzika kwemunhu nekuti tekinoroji yacho hairatidze zvese zvemufananidzo kana hurukuro, kana kuda kuve neyako - kunyangwe vazhinji vatsoropodzi vakaratidza kusahadzika kwavo.
Iyo sisitimu inoshandisa dhatabhesi rezvinongedzo kana 'mifananidzo mahedhtag' kuona zvimwe zvirimo kuti zvimakwe, asi nyanzvi dzekuchengetedza dzakayambira kuti tekinoroji yakadaro inogona kushandiswa, kana mifananidzo isina mhosva inogona kuturikirwa zvisizvo.
Kunyangwe vashandi veApple vanonzi vakaratidza kunetsekana neiyo tekinoroji yekuona, vachishushikana kuti ingangoshandiswa kushanda pakadzivirirwa nekuvharira, kuti inogona kusaziva nekumaka mamwe mapikicha - kana kunyangwe dzimwe hurumende dzaigona kuishandisa kutsvaga zvimwe zvinhu. Apple inosimbirira kuti inoramba chero zvikumbiro kubva kuhurumende kuti ishandise sisitimu yechinhu chero chipi zvacho kunze kwemifananidzo yekushungurudza vana.
"IMessages haichazopa zvakavanzika uye zvakavanzika kune avo vashandisi kuburikidza neyekupedzisira-kusvika-kumagumo yakavharidzirwa mameseji system umo chete anotumira uye vanogamuchira vanogamuchira vanogona kuwana ruzivo rwatumirwa," yakaverenga tsamba kubva kumubatanidzwa wemapoka anopfuura makumi mapfumbamwe evarwi. kuna Apple CEO Tim Cook pane zvingangoitika shanduko.
Iyo chaiyo nguva yenguva yekunonoka kwazvino haizivikanwe, asi iyo nyowani yekutsvaga system yaive pakutanga yaifanirwa kunge ichishandiswa imwe nguva gore rino.
Taliban: Vatorwa chete ndivo vanogona kubva Afghanistan kubva ...
St. Maarten: Vashanyi vakabayiwa zvizere havadi...
Nyowani WTTC chirevo chekutyaira kudzoreredza uye kuwedzera ...
Canada Braces yeDelta-Inotungamirwa 4th Wave yeCOVID-19 ...
Global Tourism Forum Inonzwa nezve Kudiwa Kwekuonekwa ...
El Al anotangazve Budapest kuenda kuTel Aviv ndege
Vols kubva kuU.SA kuenda kuMartinique paAmerican Airlines izvozvi